uyilo Lwekhitshi | Eyekhala 2022
Isilgranit isink pros kunye ne-cons yokuthenga isikhokelo malunga nokuba yintoni, uyilo lweendlela, imibala, amaxabiso kunye neengcebiso zokugcina. Jonga ukuba iSilgranit sink yeyona ilungileyo.
Ubukhazikhazi bekhabhathi zekhitshi eziphezulu ziluncedo kunye nengxaki yelacquer, i-acrylic kunye noyilo lwekhabhathi epeyintiweyo. Jonga iikhitshi ezinezimvo eziphezulu zekhabhinethi.
Iikhabhathi zekhitshi zeLacquer zilungile kwaye zinezinto eziyiyo, izitayile, ipeyinti kunye nendawo onokuyithenga. Jonga ukuba iikhabhathi zelacquer zilungele ikhitshi lakho.
Isiqithi sekhitshi ngumzekelo obalaseleyo wenqaku lekhitshi elinokudibanisa zombini ifom kunye nomsebenzi. Le galari ineempawu zekhitshi kwisiqithi sokuphefumlelwa.
Esi sikhokelo seendleko zokulungisa ikhitshi siya kukunceda ucwangcise lonke icandelo leprojekthi yokulungisa ikhitshi. Uya kufumana iingcebiso ezibalulekileyo zokulungisa uhlahlo-lwabiwo mali
Igalari eneempawu zokuyilwa kwekhitshi etofotofo ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokubekwa. Khetha enye yezi zimvo zoyilo zintle ukuze ube likhitshi lakho lokugqibela.
Izitayile zeKhabhinethi yaseKhitshini (Isikhokelo sokugqibela)
Esi sikhokelo sekhitshi lesitayile sesikhokelo sokugqibela siquka izimvo zezona ntlobo zilungileyo zekhabhathi, iingcango kunye nokugqitywa. Jonga imifanekiso yeekhabhathi zasekhitshini ezinesiko, langoku, langoku, elengcibi, indlu encinci, indlu yasefama, iirustic kunye nezitayile zelizwe.
Igalari yoyilo ebonisa ikhitshi elineziqithi ezibini kubandakanya ezangoku, ezangoku, izindlu zasefama zangoku, igourmet kunye nemibono evulekileyo.
Ikhitshi laseCape Cod (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo sokuyilwa kwekhitshi laseCape Cod ngobume kunye nemibono yesitayile. Jonga imifanekiso yekhitshi yesitayile seCape Cod ukuze ujonge ikhaya lakho.
Ukupasa kweKhitshi ngeMibono yeWindows
Wamkelekile kwigalari yethu yokupasa ikhitshi lokuyila ngeengcinga zefestile kubandakanya uyilo olwahlukeneyo. Ukudlula ekhitshini ngefestile kufakwe ngokwesiko ngaphakathi ezindlini, ukuhambisa ngokulula okanye ukuhambisa ukutya okusuka ekhitshini ukuya kwindawo yokutyela. Ezi zinokufumaneka rhoqo kwiindawo zokutyela, ukuvumela ...
Uyilo lweSiqithi seLitye
Igalari yoyilo lwesiqithi sekhitshi yelitye ngegranite, i-quartz, imarble, ilitye lesepha, i-veneer kunye nemibono yamatye. Jonga iziqithi zekhitshi zamatye.
Uyilo lweKhitshi lokubuyela umva (Igalari yemifanekiso)
Le galari yoyilo lokubuyela umva ekhitshini kunokukunceda ufezekise isitayile esinqwenelekayo kwindawo yakho yokupheka. Le mifanekiso ibonisa iintlobo ezahlukeneyo kunye
Iingcamango zeRustic Island Island
Igalari yezimvo zerustic zasekhitshini kunye nendlu yasefama, eyomzi mveliso, yokuhlala kunye noyilo lwe-DIY. Jonga imifanekiso yekhitshi eneziqithi ze-rustic.
Umzekelo ongentla ubonakalisa ubume bekhitshi obume ngo-l kunye nesiqithi esiqulathe uluhlu olwakhelweyo. Amakhitshi amile U. Uyilo lwekhitshi e-U-Shaped ngamanye amaxesha lubizwa ngokuba yi-C-Shaped okanye ikhitshi yehashe. Kolu hlobo lobeko lwekhitshi, iindawo zakho zokusebenza ezintathu zisasazekile ecaleni kweendonga ezintathu ezi ...
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi ezinamacwecwe amnyama
Igalari yeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi ezinobumba obumnyama. Jonga imifanekiso yamakhitshi amhlophe anegranite emnyama, ilitye lesepha, i-quartz kunye nemibono yoyilo lweemabhile.
Iindidi zethayile zomgangatho wasekhitshini kubandakanya indleko, iipateni kunye noyilo. Jonga imifanekiso yeethayile zekhitshi ezahlukeneyo ngezimvo zekhaya lakho.
Isikhokelo kwisiqithi sekhitshi esinki kubandakanya ukubekwa, ubukhulu, iindleko kunye nemibono yoyilo eyaziwayo. Jonga imifanekiso yesinki yesiqithi sekhitshi.
Isikhokelo ngumahluko phakathi kokuntywila okukabini kunye nekhitshi kunye neendleko kunye nokulunga. Khangela ukuba loluphi uhlobo lwesinki olulungele ikhaya lakho
Isikhokelo sokuyila imiphezulu yeekhitshi isikhombisi malunga nokuba yintoni, iintlobo ezahlukeneyo, indleko kunye nemibuzo edumileyo. Jonga iikhitshi ezinemithi ekuthiwa yi-laminate countertops.
Isikhokelo seentlobo ezithandwa kakhulu zitshini zekhitshi. Jonga imifanekiso yeesinki zekhitshi kubandakanya ukwehla, ikona, ubhedu, ifaskoti, indlu yefama, iphindwe kabini, isitya, ilizwe, iidiliya kunye nokunye ...
andiyifuni ndiyayidinga nje
ipesika kunye neesayizi zelokhwe ezisebenzela